Weerar Maanta Lagu Qaaday Xarun Millatari oo ku taala Dalka Yemen (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Qarax loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa maanta ka dhacay xarun ku taala magaalada Cadan ee dalka Yemen, sidaasi waxaa sheegay saraakiil ka tirsan dowladda dalka Yemen.
Weerarkan ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen dad gaaraya ilaa 65 qof iyadoona ay halkaasi ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya ilaa 80 qof, waxaana dadkaasi ku jiray dad uu soo gaaray dhaawacyo halis ah.
Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in qofka ismiidaamiyey uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku dhuftay dhisme ay adeegsadaan ciidamada dowladda taageersan, waxa ayna markaasi ku mashquul sanaayeen qoritaanka ciidamo cusub oo kamid noqda kuwa dowladda.
Weerarkan ayaa ku soo aadayo iyada oo bartanka lagaga jiro dagaallo hor leh oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Yemen ee 17-ka bilood jirsaday ee u dhaxeeya dawladda ay Sacuudigu taageerto iyo jabhadda xutiyiinta ee Ansar Allah.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in sidii uu u bilaawday daagaalka dalka Yemen, ay in kabadan 6,600 oo ruux ay ku dhinteen dagaalkaasi, ayna dadkaasi u badan yihiin shacab, Dad lagu qiyaasay 2.5 milyan oo ruux oo Yemeniyiin ah ayaa sidoo kale la sheegay inay ka qaxeen dagaalada.